Waa Maxay Cannabis Vape Cartridge? 3 Noocyada, Faa’iidooyinka iyo Khasaaraha. • Dawooyinka Inc.eu
Waa maxay kaydadka vape cannabis? 3 nooc, faa'iido iyo khasaare.
Cannabis waa warshad awood leh oo leh faa'iidooyin daaweyn iyo madadaalo labadaba. Waxay ka caawisaa soo saarista caafimaadka la xiriira maskaxda iyo jirka. Intaa waxaa dheer, waxaad u isticmaali kartaa geedaha si aad si dhib la'aan ah ula kulanto rabitaankaaga uumiga. Kateetarada xashiishadda Cannabis waa guntimaha dhalooyinka ay ku jiraan saliidda xashiishka ee horay loo buuxiyey. Waad badbaadin kartaa waqti iyo lacag labadaba adoo dooranaya kaydadka saxda ah ee xashiishadda canab-ka loo yaqaan. Maaddaama noocyada badankood ay isku mid yihiin, waxaad u baahan kartaa macluumaad dheeraad ah si aad u kala soocdo oo aad u iibsato midka saxda ah.
1 Maxaan iska ilaaliyaa kaydadka xashiishka cannabis?
2 Sidee ayuu u shaqeeyaa kaydadka vape-ka?
3 Noocyada Cannabis Vape Cartridges
3.1 1. Kala-bax
3.2 2. saliida CO2
3.3 3. cusbi
3.4 4. Muuqaal Dhameystiran (Muuqaal Buuxa)
4 Faa'iidooyinka gulufyadii vape
4.1 1. La qaadan karo
4.2 2. Fududeynta isticmaalka
4.3 3. Qiyaaso kala duwan
4.4 Faa'iido darrooyinka gulufyadii vape
4.5 1. Dhaqaale: kharashyada wax iibsiga
4.6 2. Nolosha baytariga
5 Xukunka kama dambaysta ah ee gulufyadii vape
Sii wad akhriska si aad wax badan uga barato kaydadka vape cannabis, sida ay u shaqeeyaan, sida loo isticmaalo iyo dhinacyada kale ee la xiriira.
Maxaan iska ilaaliyaa kaydadka xashiishka cannabis?
Khaanadaha Vape waxay ka samaysan yihiin muraayad waxayna ku jiraan xalka saliidda xashiishka. Waxaad ka dooran kartaa noocyo badan oo saliid ah oo ku kala duwan gaar ahaan xagga terpene iyo cannabinoid. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad lacag keydiso waxayna kuu sahlaysaa inaad si fudud u qaadato. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad heshid kaydadka saxda ah ee vape loo isticmaalo adhiga markasta iyo meelkasta oo aad rabto. Si kastaba ha noqotee, iska hubi inaad hesho saliid tayo sare leh oo aad ogaatid noocyada saxda ah ee kaydadka vape cannabis ee faa'iidooyinka ugu badan. Waa inaad iibsato e-juice-ka ugu fiican ee ka shaqeeya heerar kala duwan sida urursiga iyo tirada.
Sidee ayuu u shaqeeyaa kaydadka vape-ka?
Faakiyuumku wuu ka badbaado yar yahay farsamooyinka sigaar cabista dhaqameed sababtoo ah maqnaanshaha daamur qiiqa. Kahor intaadan bilaabin safarkaaga vape, hubi inaad ogtahay sida kaydadka u shaqeeyo. Kateetarada vape-ku waxay ku shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya baytariyada qalinka vape ee ku dhegan. Inta kaydadka la shidan yahay, atomizer-ka waa la shaqeeyaa fal-gal kiimikaad ayaa saliidda sababa. Waxay kaloo kululeysaa saliida waxayna soo saartaa qiiqa aad cabi karto. Thanks to horumarka xagga teknolojiyadda, qaar ka mid ah baytariyada vape-ka ee leh shaqooyin dhinacyo badan leh ayaa la heli karaa. Kuwa raadinaya nolol batari oo dheeri ah sidoo kale way ogolaan karaan CBD-Isku dayo qalimaan tayo sare leh oo xasilloonida leh.
Noocyada Cannabis Vape Cartridges
Kateetarada Vape waxay ku yimaadaan qaabab iyo qaabab kala duwan iyadoo kuxiran saliida horay loo buuxiyay. Waxaad la kulmi kartaa gulufyada sida dhalada, saliida CO2 iyo cusbada nool. Intaas waxaa sii dheer, noocyo kala duwan, sida 'Full spectrum' iyo 'Uncut oil', ayaa beddeli kara khibradaada uumiga. Hubso inaad barato noocyada kala duwan si aad ugu degto midka ugu habboon mustaqbalka.
Noocyada Cannabis Vape Cartridges (afb.)
Kani waa kaydadka vape-ka ee horay loo buuxiyay oo ka kooban saliid xashiishad ah oo saafi ah, la isku halleyn karo oo jilicsan ama weed indica ka kooban yahay. Iyada oo hababka isdaahirinta aan caadiga ahayn sida uumiga iyo molikiyuulka muxaadaro, waxaad ku guuleysatey qaababka ugu nadiifsan ee qaababka xashiishka.
2. saliida CO2
Noocan kaydadka, waxyaabaha dareerayaasha aan sunta ahayn sida kaarboon laba ogsaydhka ayaa ka caawiya nadiifinta waxyaabaha ku jira xashiishka. Tani waxay ku siinaysaa saliid xashiishad lagu kalsoon yahay oo ay ku jiraan maadooyin saafi ah iyo iskudhaf dabiici ah.
Dhammaan uumi-bixiyeyaasha jecel taabashada saliidda murugsan ee ku jirta tuubadooda, cusbada nool waa xulasho fiican. Soosaarayaasha noocyada kala duwan ee maadada nool ayaa xannibaysa xashiishadda isla marka la goosto Sidoo kale waxay ku jirtaa jawi heerkulkiisu hooseeyo illaa saliidda ay diyaar u tahay in la isticmaalo.
4. Muuqaal Dhameystiran (Muuqaal Buuxa)
Gawaarida buuxa ee gulufyada vape-ga ah waxaa ku jira dhammaan biomolecules-ka ku jira geedka xashiishka. Sidaa awgeed, waxay bixisaa udgoonka ugu fiican, dhadhanka iyo saamaynta uumiga. Ha iloobin, noocani inta badan wuu ka fiican yahay kan kale ee gulufyada vape-ka ee jira - qayb ahaanna waxaa ugu wacansoo galiSaamaynta
Faa'iidooyinka gulufyadii vape
Uumbiyeyaasha saliidda ee la isticmaalay waxay noqon kartaa gargaar aad u weyn marka ay timaaddo uumi. Waad u babac dhigi kartaa dadaal la’aan iyo daqiiqado yar. Waxa kale oo ay horseed u tahay qaadista la isku halleyn karo iyo farsamooyinka isticmaalka oo aad u fiican.
1. La qaadan karo
Iyada oo ay ku jiraan kartoonnada xashiishka loo yaqaan 'cannabis vape cartridge' marwalba waad ku cabi kartaa sigaar-socodka. Waxa kale oo ay leedahay naqshad yar oo waxay ka caawisaa gaagaaban, kal-fadhiyada vape-ka dhakhsaha badan. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah iftiinka kaydadka vape-ga si aad ugu raaxaysato khibrad uumis raaxo leh.
2. Fududeynta isticmaalka
Iyada oo leh gulufyada vape ecstatic waxaad ku raaxeysan kartaa uumiga dhib la'aan. Sababtoo ah gulufyada waxaa ku jira saliid xashiishad ah oo horay loo buuxiyay, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad riixdo badhan si aad u nasato. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad doorato nooca kaydadka saxda ah si loo kordhiyo sahlanaanta isticmaalka.
3. Qiyaaso kala duwan
Iyada oo gacan laga helayo gulufyada vape waxaad si dhib la’aan ah u xakameyn kartaa xaddiga neefta. Ka taxaddar inaadan ku badin xaddiga xashiishka badan ee aad ku baratay. Taabadalkeed, dooro kaydadka vape lagu kalsoonaan karo oo adigu qiyaastaada ku hagaaji ilbiriqsiyo gudahood.
Faa'iido darrooyinka gulufyadii vape
Ka sokow waxtarka gulufyada vape, waxa jira dhawr cillado oo ay tahay inaad ka ogaato. Xaraashyada ayaa laga yaabaa inay xoogaa qiimo ku helaan uumiyeyaasha qaarkood. Nolosha batteriga iyo saamaynta sidoo kale waxay caqabad ku yihiin jidka isticmaalayaasha.
1. Dhaqaale: kharashyada wax iibsiga
Vaping waxay u baahan tahay qasnadaha fiiqda oo ay weheliyaan saliidaha iyo qalabka kale ee la dhadhamiyay. In kasta oo ay tahay maalgashi hal-mar ah, uumi-bixiyeyaasha qaarkood waxay u arki karaan inay qaali ku tahay iibsiga.
2. Nolosha baytariga
Cillad kale oo aad la kulmi karto markaad isticmaaleyso gulufyada vape waa nolosha batteriga. Waxaad u baahan tahay inaad isha ku hayso batariga oo aad ku bedesho mid ku habboon mar haddii uu dhammaado. Waxay sidoo kale ku soo rogi kartaa dhibaato dhaqaale iyo nafsi ahaaneed kuwa xiisaynaya.
Xukunka kama dambaysta ah ee gulufyadii vape
Vaping-ka ayaa aad uga badbaado badan qaababka caadiga ah ee sigaar cabista maxaa yeelay kuma jiraan waxyaabo sun ah sida daamurka. Waxa kale oo ay bixisaa hab dhib-la'aan ah oo si fudud loo isticmaali karo uumiga dhexdeenna. Iyada oo ay ku jiraan kartoonno qiimo sare leh oo laga heli karo internetka farmashiyaha xashiishadda waad u babac dhigi kartaa sida iyo goortaad rabto. Intaas waxaa sii dheer, qaadista iyo sahlanaanta isticmaalka ayaa ah faa iidooyinka ugu waaweyn ee isticmaalka guluubyada vape.
cannabissaliida xashiishkaCBDsaliid cbdhageadhigasaliida cannabis
3 kaydadka cannabis ee labanlaabay lacagta maal-gashigan sanadkan. Mar labaad ma guuleystaan?
Waad ku mahadsan tahay Disembar daran, saamiyada ugu badan ee marijuana waxay ahaayeen horaantii 2019 ...
Soosaaraha Cannabis Tilray ayaa ku dhawaaqay toddobaadkan inay qorsheyneyso inay wareejiso Natura Naturals…
Sharciga Mareykanka ee furitaanka nidaamka maaliyadeed wuxuu noqon karaa warka xun ee qaybta cannabis ee Kanada
Warshadaha xashiishadda Kanadiyaanka ayaa waayi karaya faa'iidadooda sharci ahaan xaddidaya warshadaha baananka Mareykanka ...